गाँजालाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हटायो राष्ट्रसंघले :: चेतना गुरागाईं :: Setopati
प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका २७ देशमध्ये नेपाल पनि
गाँजाबाट बनेको तेल देखाउँदै चिकित्सक। तस्बिर स्रोतः लिफ्ली डटकम
राष्ट्रसंघको 'सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१' अनुसार गाँजालाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीमा राखिएको थियो। पछिल्लो निर्णयअनुसार अब यसलाई औषधिजन्य गुण भएको र कम खतरनाक लागुपदार्थको सूचीमा वर्गीकरण गरिएको छ।
'संसारभर औषधिका रूपमा गाँजा प्रयोग गर्ने लाखौं मान्छेका लागि यो सुखद समाचार हो,' गाँजाबारे वकालत गर्दै आएका संस्थाहरूले जारी गरेको विज्ञप्ति उद्धृत गर्दै सिएनएनले लेखेको छ।
'यो निर्णयले तत्काल गाँजा खुला गर्न सम्भव नहोला। तर, राष्ट्रस‌ंघको निर्णय कुरेर बसेका धेरै देशलाई अब गाँजाको औषधीय गुण स्वीकार गर्न र यसलाई औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सहज हुनेछ,' उनी भन्छन्।
दोस्रो विश्वयुद्धकै समयदेखि नेपाली गाँजा भारत र अन्य देशमा ब्रान्डका रूपमा स्थापित भएको मानिन्छ। ‘हिप्पी' युगको सुरूआतसँगै काठमाडौंमा गाँजा खान ‘गोरा साधु' हरूको घुइँचो लाग्न थालेको थियो। त्यति बेला यहाँ ३० वटा जति गाँजा र चरेस केन्द्र खुलेका थिए। विदेशीहरू स्वतन्त्र रूपमा ‘ब्रान्डेड' गाँजा खान असन र न्यूरोडका पसल आइपुग्थे।
त्यस बेला राष्ट्रसंघको ‘नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड' ले गाँजालाई हिरोइनजस्तो कडा लागुपदार्थको दर्जामा राखेको थियो। आफ्नो नीतिअनुसार गाँजा प्रतिबन्ध लगाउन सहयोग नगरेको भन्दै राष्ट्रसंघले नेपालको चर्को आलोचना गर्‍यो। एसिया र पश्चिमी देशमा अझै प्रतिबन्धित नभएको गाँजा तुरून्तै प्रतिबन्ध लगाउन उसले दबाब दियो।
खासगरी हिप्पी कालमा काठमाडौं छिरेका कतिपय अमेरिकी ‘लागुऔषध सेवन गर्न' यतै बस्न थालेपछि अमेरिका चिन्तित थियो। र, उसकै दबाबले नेपालमा प्रतिबन्ध लाग्यो।
गाँजालाई मान्छेको दैनिक व्यवहारमा पनि उपयोगी मानिएको छ। नेपालको मध्यपश्चिम पहाडमा यसले दाउरा आपूर्ति गर्छ। यसको चोपबाट चरेस उत्पादन हुन्छ, जुन महँगो हुनाले ‘ब्ल्याक गोल्ड' भनिन्छ। गाँजाको रेसाबाट कपडा र पातबाट उच्च कोटीको प्रांगारिक मल बनाइन्छ।
बैठकमा बोल्न दिइएको तीन मिनेट समयमा सांसद खतिवडाले विदेशमा धमाधम गाँजा खुला भइरहेका बेला नेपालले समयमै यसबारे पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए।
हेर्नुस् गाँजाबारे सेतोपाटीले गरेका स्टोरीहरूः
परित्यक्त गाँजाले किन पाउँदैछ संसारभर वैधानिकता?
'गाँजा त खोल्नै पर्ने रहेछ'
गाँजा रोक्न अमेरिकी दबाबमा बनेको नेपालको कानुन
गाँजा हामी आफैंले खोल्ने कि विदेशको कुर्ने?
पाँच पुस्तादेखिका वैद्य भन्छन्- गाँजाको आयुर्वेदिक लाभ लिन सकेनौं
‘गाँजाको परम्परागत ज्ञान विदेशीको हातमा जान सक्छ'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७, ०२:४९:००